Fihanaky ny valanaretina: nitombo efatra ka tafakatra 23 ireo tratran’ny coronavirus | NewsMada
Niampy indray ny olona tratran’ny valanaretina coronavirus raha tsy nisy izany, afakomaly. Nambaran’ny eo anivon’ny Foibe fandrindrana ny hetsika iadiana amin’ny Covid-19 (CCO), eny Ivato, fa nitombo efatra ny isan’ireo tratran’ity valanaretina ity, taorian’ny filitiliana, omaly. Tafakatra 23 izany izao izy ireo.
Nmbaran’ny mpitondra tenin’ny Foibe fandrindrana ny hetsika iadiana amin’ny Covid-19 (CCO), i Vololotiana Hanta, fa tafakatra 23 izany izao ireo tratran’io valanaretina io eto amintsika.
« 88 ireo vao natao fitiliana androany (omaly) ka voaporofo ho mitondra ny coronavirus ny efatra amin’izy ireo », hoy izy. Tafakatra 23 izany izao izy ireo ka tsy ahitana soritr’aretina ny 22 raha tratran’ny fahasemporana sy nanana olana amin’ny taovam-pisefoana kosa ilay iray efa tratran’izany. « Efa nihatsara izy ireo ary tsy misy ahina. Tsy misy koa ny namoy ny ainy », hoy ihany izy.,
Lehihaly telo sy vehivavy iray ireo tratran’ny coronavirus
otsiahiviny fa lehilahy telo, 72 sy 31 ary 25 taona ireo efatra mitondra ny Covid-19 ireo raha vehivavy 63 kosa ilay iray. Nanteriny hatrany fa arahi-maso hatrany ny fivoarany sy ny toe-pahasalaman’izy ireo amin’izao fotoana izao. Anisan’izany ny fijerena ny hafanana sy ny tosidra. « Anisan’ireo niray zotra tamin’ireo sidina farany izy ireo… », hoy ihany izy.
Tsiahivina fa maro ireo tsy nanaja ny fepetra, omaly nivoaka ny trano ary nihamaro izy ireny rehefa naheno fa tsy nahitana tranga coronavirus, afakomaly. Tokony arahina hatrany anefa ireo fepetra sy toromarika ampitain’ny tompon’andraikitra.